एकपटक संक्रमण भएपछि पुनः संक्रमण हुन्छ ? अध्ययनले यस्तोे भन्छ - टाकुरा न्युज
एकपटक संक्रमण भएपछि पुनः संक्रमण हुन्छ ? अध्ययनले यस्तोे भन्छ
कोरोना महामारीको सुरूमा कसैमा पनि भाइरसविरुद्धको प्रतिरोध क्षमता थिएन । तर, जीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रतिरोधात्मक क्षमता नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अध्ययनले कोरोना भाइरसलाई लक्षित गर्नसक्ने एन्टिबडी बनाउन सुरु गर्न करीब १० दिन जति लिने गरेको छ र अन्यको तुलनामा गम्भीर बिरामीले सबभन्दा बलियो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकास गर्ने देखिएको छ ।
एन्टिबडीको विकास भएपनि दोस्रो पटक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने देखिएको छ ।
हङकङका तथा अमेरिका लगायतका केही ठाउँमा सुरुवात संक्रमणको केही महिनापछि दोस्रो पटक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । दुई भाइरसको जेनेटिक कोडलाई अध्ययन गरेपछि पहिलो संक्रमण पुनः बल्झिएकोभन्दा पनि दोस्रो पटक संक्रमित भएको वैज्ञानिकको टोलीले निश्कर्ष निकालेको हो ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ सामान्यतया कोभिड भएका मानिसलाई संक्रमणको विरूद्ध केही प्रतिरक्षा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर, लक्षण कम भएका वा नभएकामा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ वा हुँदैन तथा सुरक्षा कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने थाहा भएको छैन ।
पुनः संक्रमणको केस निकै दुर्लभ हुन्छन् र यो किन हुन सक्छ भनेर बुझ्नका लागि ठूला अध्ययनहरू आवश्यक छन् ।
पहिलो संक्रमणले भविष्यमा हुने संक्रमणबाट बचाउने छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । साथै पुनः संक्रमित व्यक्तिले अरूलाई भाइरस सार्न सक्षम हुनेछन् व छैनन् भन्ने पनि अस्पष्ट छ । त्यसैले, संक्रमणमुक्त भएपनि समाजिक दूरी अपनाउने, मास्क लगाउने, नियमितरुपमा हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने जस्ता सतर्कता अपनाइरहनु पर्छ ।
Tags: #कोरोना#स्वास्थ्य टिप्स